Madaxweynaha Gal-Mudug oo kormeeray goobihii laga xoreeyay Kooxaha Al-shabaab.[Masawiro]
July 22, 2021 - Written by Editor
Camaara:-Madaxweynaha Gal-Mudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa maanta kormeer ku tagay goobihii laga xoreeyay kooxaha argagaxisada ah ee Shabaab. Madaxweynaha ayaa safar dheer oo dhulka ah kaga ambabaxay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug asagoona gaaray galinkii hore ee maanta magaalada Wisil ee Gobolka Mudug.
Saraakiisha ciidamada qalabka sida ee howlgalada ka wada halkaas ayaa madaxweynaha kusoo dhaweeyay wisil asagoona halkaas warbixin kaga dhageystay.
Madaxweynaha oo safarkiisa sii wata ayaa kormeer ku sii maray deegaano ka tirsan Bacadweyne asagoona ugu danbeyntii tagay Degmada Bacadweyne oo ciidamada qalabka sidda ay dhawaan ka xoreeyeen kooxaha khawaarijta ah ee nabaddiidka ah.
Madaxweynaha oo ay wehliyaan Wasiirka Amniga Galmudug iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa galinkii danbe ee maanta kormeerkiisa ku soo afmeeray Degmada Camaara iyo deeganada hoos yimaada oo dhawaan laga sifeeyay kooxaha Nabaddiidka ah.